Iifoto ezinomtsalane ngezi zicelo zintathu zibonelelwa | Ndisuka mac
Sifikile kwinqanaba lesithuba seveki yomsebenzi kwaye siyayenza, phantse yonke imihla, ngokukhetha izicelo ezinkulu ekunikezelweni, ngezaphulelo ezingenakuphikiswa ukuze ufumane okuninzi kwikhompyuter yakho kodwa ngokugcina imali. Namhlanje siza kunika ingqalelo ekhethekileyo ukuhlela kunye nokuphinda ufake iifayile kwi-Mac ngezixhobo ezintathu eziluncedo kakhulu onokuzifumanela oko ukuchitheyo kwikofu yakho yasekuseni, kwaye onokuthi ngayo unike iifoto zakho ubuchwephesha obunobunkunkqele, oqobo, obukhethekileyo kunye nomgangatho.
Ungalibali ukuba ezi nyuselo zilandelayo ziya kusebenza okwexeshana kuphelaOko kukuthi, ngaphandle kokuba ndikuxelele ngenye indlela, ekubeni ndivela eMac sinokuqinisekisa kuphela izaphulelo ngexesha lokupapasha esi sithuba kuba abaphuhlisi bengakhange banikeze ngolwazi oluthe kratya. Ke ngoko, ukuba usetyenziso lunomdla kuwe, ndikucebisa ukuba uluthenge ngokukhawuleza ukuze ube nokusebenzisa isaphulelo. Kwaye ukuba ayithandi ukuthanda kwakho, ungayibuyisa kwaye ufumane kwakhona utyalomali lwakho. Hayi! Kwaye ungalibali ukuba into endiyizisileyo izolo isasebenza, ipakethi engakholelekiyo yeetrafti zoMbhali weeBooks ngaphezulu nje kwe-euro, ukuba uyila iincwadi ngale software ilumkileyo yeapile, ungxame uyokuyijonga. apha.
1 Ifoto yokuCima
2 Emva koJoliso-Imvelaphi yemifanekiso yokufiphaza iBokeh
3 Ipeyinti yam yePeyinti eBrush
Siza kuqala olu khetho lwezicelo zokufota iMac namhlanje ngoLwesithathu kunye nesona sixhobo silula kunye nesincinci kunazo zonke kodwa esingathandabuzekiyo, siya kuba luncedo kakhulu kwiimeko ezithile. Imalunga ne Ifoto yokuCima kwaye yinto efana ne "eraser" kwiifoto zakho.
Kukangaphi umlinganiswa othile ethe tyaba kule foto ikhethekileyo kwaye awufuni ivele? Ngaba ukhe uthathe isithombe esimangalisayo sesakhiwo sembali kodwa uphawu lwezithuthi okanye ikhonteyina esemsebenzini yonakalisa umfanekiso? Kunye Ifoto yokuCima uthanda susa ngokulula naziphi na izinto ezingafunekiyo kwiifoto zakhoUkusuka kokubhaliweyo nakwii-watermark kubantu, izinto, izilwanyana kunye neethegi zesikhumba. Isixhobo esisebenza kakhulu kwaye kulula ukusisebenzisa.
Ifoto yokuCima Inexabiso eliqhelekileyo le-10,99 euro, nangona kunjalo ngoku ungayifumana ngesaphulelo seepesenti ezingama-90 ngokuhlawula kuphela i-1,09 euro Ixesha elilinganiselweyo. Thatha isithuba se!
Ifoto yokuCima€ 2,99
Emva koJoliso-Imvelaphi yemifanekiso yokufiphaza iBokeh
Ifoto yokuCima iluncedo olukhulu lokulahla izinto ezingafunekiyo kunye nabalinganiswa nangona kunjalo, Emva kokugxila sisicelo sokufota oza kusithanda.
Con Emva kokugxila uthanda linganisa imowudi yemizobo ebonelelwa yi-iPhone 7 Plus okanye iikhamera zobungcali Ukujolisa ingqalelo kumxholo ophambili wefoto kunye nokushiya ukungacacanga, imvelaphi engacacanga, eyonyusa ukuziva kobunzulu. Yi ukhetho oluqhelekileyo lwesiko onokuhlengahlengisa ukunambitha ngokulula ngenxa yolawulo olunokuhlengahlengiswa. Kunye Emva kokugxila unokwenza nayiphi na ifoto ibonakale kwabanye ngaphandle kwesoftware eyongezelelweyo okanye ulwazi olunzulu.
Kwakhona, Emva kokugxila Inokusebenziseka ngokulula kakhulu kokusebenzisa umsebenzisi kunye nezinto ezininzi ezinje:
Iindlela ezimbini zokulungisa (imo yesiqhelo kunye nemowudi yesiko).
Amanqanaba ama-5 okufiphala.
Ukuchaneka okuphezulu ngokulungelelanisa ukufiphala.
Ukuhlela nokujonga kwangaphambili ngexesha lokwenyani.
Guqula imbali ukuze urhoxise ngokukhawuleza kwaye wenze kwakhona.
Emva kokugxila Inexabiso eliqhelekileyo le-10,99 euro, nangona kunjalo ngoku ungayifumana ngaphezulu kwesaphulelo seepesenti ezingama-90 kuphela i-0,49 euro Ixesha elilinganiselweyo.
Emva koJoliso-Imvelaphi yemifanekiso yokufiphaza iBokeh€ 9,99
Ipeyinti yam yePeyinti eBrush
Kwaye sigqiba olu khetho ngo Ipeyinti yam yePeyinti eBrush, usetyenziso oluhle kakhulu lokuhlela iifoto onokuthi wenze njalo ngazo Guqula iifoto zakho zibe yimizobo ngaloo ndlela ubanika imbonakalo yoqobo kunye neyodwa, ngokungathi yimisebenzi yobugcisa eyenziwe ngebrashi.
Esi sisixhobo esipheleleyo, esingaphezu kwekhulu leentlobo zeebrashi kunye nemisebenzi emininzi onokuyisebenzisa ngokukhawuleza nangokulula. Musa ukumsindisa.
Ipeyinti yam yePeyinti eBrush Inexabiso eliqhelekileyo le-6,99 euro, nangona kunjalo ngoku ungayifumana ngesaphulelo esingaqhelekanga kuphela i-1,09 euro Ixesha elilinganiselweyo.
I-PaintBrush Pro yam: Zoba kwaye uhlele€ 5,99
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iinkqubo zeMac » Iifoto ezithandekayo ngezi zicelo zintathu zinikezelwayo